K: တို့ ပြည်ထောင်စု လူထု ရေ..
ပြီးတဲ့ အပတ် .. ဖုန်း ပြော တုန်းက.. စာအုပ် တွေ အကြောင်း ဘာမှတောင် ပြောလို့ မ၀ သေး ခင်.. ဖုံးကဒ် ကလည်း ကုန်သွား တယ် လေ။ အခု ..ဖေဖေ့ စကား တွေ ကို.. အီးမေးလ် နဲ့ ပြည့်ပြည့် စုံစုံ အေးအေး ဆေးဆေး ဖတ် ရ တော့ မှ.. တချို့ အချက် တွေ သမီး ပြန် ပြင် တွေး မိ တော့ တယ်။
ဟုတ်တယ်.. သမီး ကလည်း လေ.. အဲဒီ စာအုပ် နှစ် အုပ် ကို ဖတ် ပြီး သွား တာ နဲ့ .. အိုး.. ရင်ထဲ မှာ.. မေးခွန်း တွေ ပြည့်ကျပ် လာ လို့ .. ချက်ခြင်း ဖေ့ ကို ဖုန်း ကောက် ဆက် မိ လိုက်တာ..။
ငါ့သမီး လည်း ဖေဖေ ၆၂ ခု နှစ် လောက်က.. လူမျိုးစု အရေး တွေ အပေါ် အမြင် အသစ် တွေ ဖြစ်ရင်း.. တနုံ့ နုံ့ ဖြစ်နေတာ မျိုး.. ခု ဖြစ် နေတယ် ထင် တယ်.. လို့.. ဖေဖေ ပြောတော့.. ဖေဖေ့ မျက်နှာ ကြီး ပြုံးမဲ့မဲ့ ကြီး ဖြစ်နေ မှာ.. သမီး ဒီဖက် ကနေ.. မြင် ယောင် နေ မိတယ်။
အကြောင်း အချင်း အရာ တွေ အားလုံး က.. အဟောင်း အမြင်း တွေ ထဲက.. မထွက် နိုင် သေး ဘူး ဆိုတော့.. သမီး လည်း.. အဟောင်း တွေ ထဲ ပဲ.. ပြန် ၀င် ကြည့် ရ တော့ တာ ပေါ့..။ တကယ် တော့.. အဲဒီ စာအုပ် ကို က.. ခေါင်းစဉ် ကော.. ပုံလေး ကပါ.. တအား စိတ်ဝင် စား စရာ ကောင်း နေ လေ တော့.. ဘန်ကောက် လေဆိပ် ရောက်တုန်းက.. Asia bookstore က နေ ၀ယ် ခဲ့ လိုက်တာ ။ ဟိုး အရင် တခါ တုန်းက ဖေ့ ကို ၀ယ်ပေး ဘူး တဲ့ .. Twilight over Burma စာအုပ် လည်း.. အဲဒီ လေဆိပ် ဆိုင် က ပဲ ၀ယ်တာ လေ...။ အခု စာအုပ် လည်း..သမီး အဆင်ပြေ ရင် လူကြုံ နဲ့ ပို့ ပေး လိုက်မယ် ။ တကယ် တော့..သမိုင်း ဆိုတာ ကြီး က လည်း သင်ခန်းစာ တခု လို ဖတ်နေ ခဲ့ ရ တုံးက.. ရောတိ ရော ထွေး ရယ်.... ။ အခု လို..လူပုဂ္ဂိုလ် တွေ ရဲ့.. အဖြစ် မှန် ဇတ်ကြောင်း လေး တွေ နဲ့ တွဲ ဖတ် ရ တော့ မှ.. အရ သာ ရှိ လိုက် တာ လေ..။
တိုက်ဆိုင် ချင် တော့.. အဲဒီ The Moon Princess စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး သွား တဲ့ အချိန် မှာ ပဲ.. ရှမ်း မိတ် ဆွေ တယောက် လက်ဆောင် ပေး သွား ဖူး တဲ့.. Shan Conandrum စာအုပ် ကလေးက.. စာအုပ်စင် ထဲ ထိုးထဲ့ ထားမိ ရာက.. ထွက် လာ တာ..။ အဲ စာအုပ် ကို ရ တုန်း က ..သိပ် စိတ်မ၀င် စား လှ တော့.. မဖတ်ပဲ ထိုးထား လိုက် မိ တာ လေ ..။ ခုတော့ မှ.. ရှမ်း သမိုင်း တွေ ထဲ.. တခါ တည်း ပြုတ်ကျ သွား လိုက် တာ ဆိုတာ... အကြောင်း အရာ တွေ ကလည်း စိတ်ဝင် စား စရာ ကောင်း..စာရေး တဲ့ သူတွေ က လည်း ..ကိုယ် တွေ့ ခံစား ချက် တွေ ကိုယ်စီ နဲ့ ဆိုတော့.. သမီး တောင် ရှမ်းမ ချက်ခြင်း ဖြစ် သွား မိ တော့ တာပဲ..။ တကယ် ပဲ..ဖေ… မြေလတ် မှာ မွေးခဲ့ တဲ့..ဗမာ စစ်စစ် ဖေဖေ့ ရဲ့ သမီး လေ.. ရှမ်း မ လည်း ဖြစ်..ကရင်မ လည်း ဖြစ်..မွန်မ လည်း ဖြစ် သွား ပြီး တော့... တပြည်ထောင် စနစ် ကြီး နဲ့.. ဗမာ လူမျိုး ကြီးဝါဒ ဆို တာ ကြီးကို.. စိတ်ပျက် သွား လိုက် မိတာ ဆို တာလေ..။
ဖြစ်ချင် တော့.. စာအုပ် ၂ အုပ် မှာ ..ပထမ တအုပ် က.. ရှမ်းပြည် ရဲ့.. အရေး အပါ ဆုံး စော်ဘွား ကြီး လည်း ဖြစ်.. ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ ပထမ ဆုံး သမ္မတ ကြီး လည်း ဖြစ်ခဲ့ တဲ့..ညောင်ရွှေ စော်ဘွားကြီး စ၀်ရွှေသိုက် ရဲ့.. သမီး ကြီး .. စ၀်စန္ဒာ ရေး တဲ့ စာအုပ် ။
နောက် တအုပ်က.. စော်ဘွား စနစ် ကို မယုံကြည် တဲ့ .. တော်လှန်ရေး ကောင်စီ ရဲ့.. ပထမ ဆုံး ရှမ်းပြည် ရေးရာ ၀န်ကြီး ဖြစ် ခဲ့ တဲ့.. နမ့်ခမ်း ဦးထွန်းအေး ရဲ့.. သား အငယ်ဆုံး.. အောန်ဒရေအေး (ဦးမောင်မောင်အေး) က ရေး တဲ့ စာအုပ် ဆိုတော့.. ဘယ် လောက် ကွက်တိ ဖြစ် သွား သလည်း ။ ထွက် ထား တာ က လည်း ရှေ့ဆင့် နောက် ဆင့်..။ The Moon Princess က.. ၂၀၀၈ က.. ထွက်တယ်။ Shan Conundrum က..၂၀၁၀ မှာမှ ထွက် တာ။
တူညီ တဲ့.. မျိုးချစ်စိတ် ပေါ် မှာ အခြေခံ ထား ပေမဲ့.. မတူညီ တဲ့.. နောက်ခံ ကားချပ် နှစ်ခု ကို ဆက်စပ် ထပ် ပေါင်း ကြည့် လိုက် တော့.. ဖေဖေ ရယ်.. မြင်ကွင်း ကြီးက..ကျယ် သွား လိုက်တာ ဆိုတာ .. ။
သမီး တို့.. ဖတ်ရှု သင်ယူ ခဲ့ ရတဲ့..ဟိုးရှေးရှေး သမိုင်း တွေ ဆိုတာ.. တကယ်ပဲ..ရာဇ၀င်.. မင်း သမိုင်း ကြောင်း တွေ ချည်းပဲလား .. စစ်ပြီးခေတ် သမိုင်း ဆို တာ တွေ ကလည်း.. ဗမာ ဗားရှင်း နဲ့ ရေးထား တဲ့..ဗမာ့ သမိုင်း ကြီး တွေ ချည်း များ လား လို့ သံသယ လည်း ၀င် လာ မိ တယ်..။
စာ ထဲ မှာ ဖေဖေ ပြော ထား သလို.. ဘာမန်နိုက်ဇေးရှင်း ဆိုတာ ကြီး က.. မနူဟာ ..မွန်မင်း..ထီးနန်းကျ ပြီး ပုဂံ မှာ စစ်သုံ့ပန်း ဖြစ်ကတည်း က.. စ ခဲ့တာ ။ အဲဒီ ကတည်းက.. ဗမာ အများစု ဆီ မှာ.. အနည်း နဲ့ အများ ဆို သလို..အမြစ် တွယ် နေ ခဲ့ တယ် ဆိုတာ.. ဟုတ် နေ တာ ပဲလေ။
++ ဗမာပြည် အ၀ှမ်း ကို တို့ အိမ် မှတ်ပါ..တို့ယာ မှတ်ပါ .. အဲဒါ တို့ဗမာ+++ တဲ့..။
ဟုတ်ပါ့..ဖေဖေ ထောက်ပြ မှ..အဲဒီ သီချင်းကို သမီးတို့ ဆိုကောင်းကောင်း နဲ့ ဆိုခဲ့ ကြ တာ နော်..။
တကယ်တော့..လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ် ကြည့် ရင်.. လူများစု က..လူနည်းစု အပေါ်..လွှမ်းမိုး တတ်တဲ့သဘော.. အင်အားကြီး သူက..အင်အားနည်း သူ အပေါ်..အုပ်စိုး အနိုင်ယူ ချင် တဲ့ တောတွင်း ဥပဒေသ ဟာ.. ဂျော့ခ်ျ အိုဝဲလ် ရဲ့ ၀တ္ထု ထဲ မှာ တော့..ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး နဲ့ မို့ ရီ စရာ ကောင်းချင် ကောင်း နေပါ လိမ့်မယ် ။ မြန်မာပြည် မှာ တော့.. မညီမျှ မူ တွေ နဲ့ အတူ… နာကျည်း မုန်းတီးမူ တွေ က.. သိပ်ကို နက်ရှိုင်း နေ ခဲ့ ပြီ နော် ။
ညီမျှ ဖို့ ဆိုတာ တော့ မပြော နဲ့လေ.. ။ ဓါတ်ငွေ့ ထွက်တဲ့ ရခိုင် တွေ.. မီး အိမ် ထွန်းပြီး.. အသိမ်းခံ ရတဲ့ မြေတွေ လိုက်ရှာ နေ ရ သလို..ကချင် လူမျိုးစု တွေ ရဲ့.. အသက် ဖြစ်တဲ့ မြစ်ဆုံ ဒေသ ကို..ဦးခေါင်းကနေ စပြီး.. ဖြတ် ရောင်း ကြ တော့.. ဘယ်သူ့ ဆန္ဒ နဲ့..ဘယ်သူ့ အကျိုး အတွက် တဲ့ လည်း..။ ရှမ်းပြည်နယ် က.. မိုးကုတ် ကျောက်သံ ပတ္တမြား တွေ ကို.. ဘယ်သူ တွေ ပဲ.. ရောင်း စား နေ ကြ သလည်း ဆိုတာ က ရော..။ တိုင်းရင်းသား ဒေသ စစ်ဆင်ရေး တွေ နဲ့.. နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေး.. လူမျိုးတုန်း ၀ါဒ ဆိုတာ တွေ.. တော့.. ထဲ့ မပြော တော့ပါဘူး.. ဇတ်ရိုင်း နာ ပြီး အဟောင်း တွေ ချည်း သိပ် ထပ် ကုန် တော့ မယ်။ တော်ကြာ ပရိုပိုဆယ် တင် ဖို့ လို့ ထင်နေ အုံးမယ်း)
စာအုပ်တွေ အကြောင်း ဆက်ပြော ရ ရင်.. စ၀်စန္ဒာ ရဲ့ စာအုပ် ထဲ မှာ တော့.. နည်းနည်း ပရေသရာဇ်.. အငွေ့ လေး တွေ လွှမ်းနေ တာ .. ကိုလိုနီ စနစ် ကို တမ်းတ တာ လေး တွေ..ရှိနေပေမဲ့.. အသက် ၈၀ ကျော် အရွယ်.. ပညာတတ် အမျိုးသမီး ကြီး တယောက် အနေ နဲ့.. သူ့ ရဲ့.. အတွေ့ အမြင် သုံးသပ်ချက် တွေ ကို လည်း .. မမြင်ယောင် ပြု ထား လို့ တော့ မရ ဘူး ဖေဖေ ။
စာအုပ် ရဲ့ အဖွင့် မှာ ကို.. သူက ပြော ထားတယ် ။ အခု လက်ရှိ မြန်မာ ပြည် မှာ ရင်ဆိုင် နေ ရ တဲ့..လူမျိုးစု ပြသာနာ တွေ နိုင်ငံရေး အကြပ် အတည်း တွေကို နားလည် ဖို့ ..ဖြေရှင်း နိုင် ဖို့ အတွက် ...ဟိုး ကတည်းက.. ရှမ်း နဲ့ ဗမာ တွေ အကြား ဘယ်လောက် တောင် တွေးခေါ် လက်ခံ မူ တွေ ကွားခြား ခဲ့သလည်း ဆိုတာ တွေ ကို .. သူ ကြိုးစား ပြီး ဖော်ပြ ထား တာ ပါ တဲ့။ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ အုပ်စိုးမူ ကို တောင်.. ဗမာ တွေ က..ခါးသက် နာကျင် ခဲ့ ကြ ပေ မဲ့.. ရှမ်း တွေ နဲ့ တခြား လူမျိုးစု တွေ အတွက် တော့.. သက် သောင့် သက်သာ ရှိ ခဲ့ တယ် လို့..သူက.. ပြော ထားတယ်။ ဗမာ တွေ..အုပ်စိုး တာ ထက်တော့..သာတယ် လို့ ဆိုချင်တာ နေမယ်..။
အကြမ်းဖျင်း တော့.. သမီး တို့ လည်း အဲဒီ လို ပဲ.. နားလည် ခဲ့ ကြ တာ ပါ ပဲ ။ အထူး သဖြင့်.. ကရင် တွေ ကို..အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ က.. ဘယ်လောက် လက်သပ်မွေး.. (အင်း.. ဒီ စကားလုံး ကြီးက..နည်းနည်း တဖက်သက် ဆန် မလား လို့.. ) ကြည့် ရှု ခဲ့ သလည်း ။ ဒါပေ မဲ့..ဖေဖေ ပြော သလို.. လွတ်လပ် ရေး ပေးကာ နီး မှာ.. ကရင် တွေ အရေး ကို.. အံ့သြစရာ ကောင်းလောက် အောက် လျစ်လျု ရှု ခဲ့ တယ် ဆိုတာ..။ အဲဒီ အချိန် မှာ.. အင်္ဂလိပ် ရဲ့ အခြေအနေ ကလည်း.. တကယ့် အကြပ် အတည်း တွေ နဲ့.. ဆို တော့.. အကုန် လုံး ကို ထောင့်မစေ့ နိုင် တော့ပဲ.. တချို့ ကိစ္စ တွေကို.. ဖေဖေ့ စကား အတိုင်း ဆို.. ဓနရှင် တချို့ လက်ထဲ မသိမသာ ထိုးအပ် ခဲ့ သလား မှ မသိတာ ။
စ၀်စန္ဒာ ရဲ့ အမြင် တချို့ မှာ လည်း.. အဲဒီ ခေတ်..အင်္ဂလိပ် ဖက် ယိမ်း တဲ့ ပညာတတ် လူ တန်းစား တွေ ရဲ့ အမြင် မျိုး တွေ တွေ့ ရတယ်။ ဥပမာ.. အဲဒီ အချိန် က..လေဘာ ပါတီ မှာ..ပြသာနာ ပေါင်းစုံ ရင် ဆိုင် နေ ရ ပြီး.. ကိုလိုနီ နိုင်ငံ တွေ ရဲ့ ပြသာနာ မှန်သမျှ ကိုလည်း.. မဖြေရှင်း နိုင် တော့ လို့.. အချိန် တန် ရင် အလိုအလျောက် ရ လာ နိုင် တဲ့ လွတ်လပ်ရေး ကို.. ဗမာ တွေ ဖက်က.. အစော တလျင် ပြု ခဲ့ သလား ဆို တာ မျိုး လေး တွေ ပေါ့..။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နဲ့ ပတ်သတ် လို့ လည်း.. မေးခွန်း တွေ အတော် များများ ထုတ် ထား လေ ရဲ့..။ အထူး သဖြင့်..ပင်လုံ စာချုပ် ကြီး နဲ့ ပတ်သတ် ပြီး..ဗိုလ်ချုပ် အပေါ် မှာ မချိတင်ကဲ.. အမြင်လေး တွေ ကို တွေ့ ရ တယ်။
သူ့ အဖေ စ၀်ရွှေသိုက် ကို လည်း ..ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ကြီး သာ ဖြစ်မလာ ခဲ့ရင်..အများလေး စား ခံ ရတဲ့..ညောင်ရွှေ စော်ဘွား ကြီး တယောက် အနေ နဲ့.. ရှမ်း အရေး တွေ ကို ဒီ့ထက် ပို ပြီး စိုက်လိုက် မတ်တပ် ရှိ ခဲ့ လေ မလား ပေါ့..။ တကယ့် တကယ် သူ့ အဖေ ဟာ .. ဘာ မှ သိပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိ လှတဲ့..ဗမာ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် က နေ .. ပင်လုံ စာချုပ် ကြီး နဲ့ အတူ ..လျစ်လျု ရှု ခံ လိုက် ရ တဲ့.. ရှမ်း အရေး .. တောင်တန်း အရေး တွေ ကို ပြန်လှည့် ကြည့် ဖို့ လုပ်တော့ .. ၁၅ နှစ်လောက် အတွင်း မှာ.. အရာရာ ဟာ သိပ်ကို နောက်ကျ နေ ခဲ့ ပြီ ။ ဒါကိုပဲ.. ဗမာ အစိုးရ က.. ပုန်ကန် တော်လှန် မူ တခု လို့ ယူဆ ခဲ့ တာ ဖြစ် တယ် လို့.. ကောက်ချက် ချ ထား တယ်။
ဒီနေရာ မှာ တခုက.. ဖေဖေ ပြော သလို .. အင်္ဂလိပ် က အရေး လုပ်ပြီး ပြသနာ ချဲ့ နေ တဲ့ တောင်တန်းဒေသကို ဖြေရှင်း ဖို့ ပင်လုံစာ ချုပ် က.. အရေးကြီး လာ တယ် ဆိုပေမဲ့.. ဗိုလ်ချုပ်.. လန်ဒန်ကို ရောက် တော့.. ဒီက နေ ပြီး ရှမ်းစော်ဘွား တွေက.. ကြေးနန်း နဲ့ လှမ်းပြီး ကန့်ကွက် လို့.. ဒီကိစ္စ တွေ ဖြစ် လာ တာ လည်း တပိုင်း တော့ ပါမယ် ထင်တယ်။ အင်းနော်..စော်ဘွား တွေ ကလည်း.. သူတို့သမိုင်း အစဉ်အဆက် ရှိလာခဲ့ တဲ့..ပဒေသရာဇ် အုပ်ချုပ်ရေး ပုံစံ လေး ကို Federated Shan States အဖြစ် နဲ့.. ဘုရင်ခံ အောက်မှာ နေ လာ ခဲ့ တာ အသားကျ နေ ခဲ့ ပြီ ဆိုတော့.. အနည်း ဆုံး တော့.. စည်းမျဉ်းခံ ဓနသဟာယ ပုံစံ နဲ့ ပဲ ဆက်သွား ချင်မယ် ထင်တယ် လေ..။ ဒါမှ မဟုတ်..တကယ်ပဲ..ဗမာ တွေ အပေါ်.. သံသယ ကြီး ခဲ့ လေ သလား..။ ဒီနေရာ မှာ ပင်လုံ စာချုပ် အတွက်..ဗိုလ်ချုပ် ပေးခဲ့ တဲ့ ကတိ စကား လေး ကိုပဲ သဘော ကျ မိ တယ်။ တောင်တန်းသား တွေကို ဗြိတိသျှ ကျွန် လည်း မဖြစ် စေ ချင်ဘူး.. ဗမာ ကျွန်လည်း မဖြစ်စေရ ဘူး ... ဆို တာလေး လေ..။ ခက်တာက.. ဗမာ တွေ ဖက်က.. ဗိုလ်ချုပ် တယောက်ပဲ.. လက်မှတ် ထိုး ခဲ့ ပြီး.. ဗိုလ်ချုပ် သေ တော့.. ပွဲပြီး မီးသေ ဖြစ်သွား တာ လား..။ တကယ် တော့..ဖေ ရယ်.. ပင်လုံ စာချုပ် ဆိုတာ ကြီး ကလည်း..လူတွေ အခု ထိ လိုက်ရှာ နေကြ ရ တဲ့... ရတနာ မြေပုံ ကြီး လို ပါ ပဲ လား ။
ရှမ်းမူ ဆိုတာ ရဲ့ သဘော ကို လည်း ဖေဖေ ပြော မှ.. .ပိုရှင်း သွား တယ်။
ဟုတ်တာပဲ.. ရှမ်း အရေး မှာ.. အုပ်ချုပ်သူ စော်ဘွား နဲ့ အုပ်ချုပ်ခံ ပြည်သူ ဆိုပြီး အမြင် ၂ ခု ကွဲ ပြား နေ နိုင် သေး တာပဲ ။ သူတို့ ဟာက.. အထက်လွှတ်တော် မှာ စော်ဘွား ၂၅ နေရာက.. အလိုလို ထိုင်ခုံ ရ ပြီး သား ဆို တော့.. ရှမ်းပြည်သူ တချို့ အတွက်.. ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် စရာ တွေ ဖြစ်လာ မှာ ပေါ့..။ သမီး စိတ်ဝင်စား တာ က ..ကိုယ်စားလှယ် တွေ အားလုံး ရှမ်းပြည်သူ က.. ရွေးကောက် ရ မယ် ဆိုတဲ့.. အဲဒီ ရှမ်းမူ ကို တင်သွင်း တော့..အတူ ပါ ခဲ့ တဲ့..စော်ဘွား တွေ ကို ပဲ။ တချို့ လည်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေး အမြင် ရှိတဲ့.. ခေတ်ပညာ တတ် စော်ဘွား တွေ ရှိ နေ ခဲ့ ပြီ ပဲ။ စ၀်စန္ဒာ ကတောင်..သူ့ အဖေ စ၀်ရွှေသိုက် ဟာ လည်း .. ပြော့ပျောင်း တဲ့ အမြင် ရှိ ပြီး တချိန် မှာ စော်ဘွား တွေ အာဏာ စွန့် ရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို အတော်အစော ထဲ က.. သဘော ပေါက် ထား သူ ဖြစ် တယ် လို့.. ဆို ထားတယ်။
အဲဒီ မှာ ထပ် စိတ်ဝင် စား ပြန် တာက.. Shan Conundrum စာအုပ်ထဲက.. နမ့်ခမ်း ဦးထွန်းအေး တို့ လို.. ရှမ်းလူငယ် တွေ က ကျ တော့.. အဲဒီ အချိန် မှာ.. ဖဆပလ အပေါ် သိပ် ကို ယုံစား လွန်းပြီး.. စော်ဘွား တွေ အပေါ် သဘောထား တင်းမာ ခဲ့ တဲ့ အချက်။ ပြည်မ နဲ့ နီးစပ် ခဲ့ တဲ့.. အချက် ။ အဲဒါ ကြောင့် လည်း တော်လှန်ရေး ကောင်စီ တက်လာ တော့.. ဦးထွန်းအေး ကို..ရှမ်းပြည်နယ် ဥက္ကဌ ရာထူး ပေး ခဲ့ တာ .. သိပ်တော့ မဆန်း လှ ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့.. စာအုပ် ထဲ မှာ တော့.. အောန်ဒရေအေး က..သူ့အဖေ ဟာ.. အဲဒီ ရာထူး ကို.. အတင်းအကျပ် ဖိအားပေး ခန့်ထား ခြင်း ခံ ခဲ့ ရ တာ လို့ ပြောထားတယ်။
စော်ဘွား အုပ်ချုပ်မူ အကြောင်း တော့ သိပ်အကျယ် ရေး မထား ပေမဲ့.. သူ့ အဖေ ဟာ..စော်ဘွား စနစ် ကို မူ အား ဖြင့် မထောက်ခံ ခဲ့ သော်လည်း.. စ၀်ရွှေသိုက် တို့ လို.. ရှမ်းစော်ဘွား နိုင်ငံရေး သမား ကြီး တွေကို.. လေးစားသမူ အမြဲ ရှိ ခဲ့တယ်..ရှမ်းအစဉ် အလာ နဲ့ ယဉ်ကျေးမူ တွေ ကို နှစ်နှစ်ကာကာ ကို ထိန်းသိမ်း ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တယ် ဆိုတာ.. စိတ်ဝင်စားစရာ အဖြစ် အပျက် ဇတ်ကြောင်း ပြန် လေး တွေ နဲ့.. ရေးထားတာ..တော်တော် ဖတ် လို့ ကောင်းသား .. ။ စော်ဘွား မျိုးဆက် အကြွင်းအကျန် တွေ နဲ့..မဆလ ခေတ် အစော ပိုင်း တောင်ကြီး မြို့ ကို …သူ မှတ်မိ သလို တကွက်ချင်း ပြန်ရေး ပြ ထားတာ..တောင်ကြီး သား တွေ ဆို ပို ဖတ်ကောင်းမယ်။ စာအုပ်က.. အခန်းခွဲ တာ တော့..နည်းနည်း အားနည်း တယ်။
ဖေဖေ ဆိုရင် လည်း..သမီး ထက် ပို ဖတ်ကောင်း မှာ သေချာ တယ် ။ မဆလ တခေတ် လဲ ကာစ ကာလ တွေက.. အကြောင်း တွေ ဆိုတော့.. ဖေဖေ တို့ အတွက်.. ဆက်စပ် ကြည့် လို့ ရ တဲ့..သမိုင်း အပိုင်း အစ တွေ ဖြစ် မှာ...။ သမီး မှာ ဖြင့်..နမ့်ခမ်းက.. မစ်ရှင် ဆေးရုံ ကြီး နဲ့.. ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ကြီး Seagrave အကြောင်း ..သူ့ရဲ့.. ခေတ်ဦးပိုင်း သူနာပြု သင်တန်း ကျောင်း ကြီး အကြောင်း တွေ ကို အခု မှ သိ ပြီး.. အရမ်း စိတ်ဝင်စား သွားတာ.. ။ ဒီဆရာဝန် ကြီး ကို ရှမ်းတွေ ဘယ်လောက် ချစ် သလည်း လို့.. စ၀်စန္ဒာ ရဲ့ စာအုပ် မှာ လည်း.. ခေါင်းစဉ် သပ်သပ် ကို ပေး ပြီး သူ ငယ်ငယ်က.. ဆရာဝန် ကြီး ခွဲစိတ် ကုသ ပေး ခဲ့ ပုံလေး ကို.. ရေး ပြ ထား သေး တယ်။
ဖေဖေ ပြော တော့ မှ.. ရှမ်းလူထု တွေ ကြားထဲက ..အဲဒီ ဆရာဝန် ကြီး ရဲ့.. နာမယ် နဲ့ လူချစ်ခင် မူ ကို.. အမျိုးမျိုး ချေဖျက် ဖို့ ကြိုးစား တာ.. နောက်ဆုံး.. တောင်ကြီး ရုရှ ဆေးရုံ သစ်ကြီး ကို.. စ၀်စံထွန်း ဆေးရုံ ဆိုပြီး.. စီဂရော့စ် နာမယ် ကို ဖုံး အောင် လုပ် ပြစ် တာ.. ဆိုတဲ့.. ထင်မြင် ချက် မျိုး တွေ.. ဖေဖေ ပြောမှ.. တွေး မိ တော့ တယ်။ ဘာဖြစ် သလဲ နော်..။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူ မျိုး ကောင်းကျိုး အတွက် လုပ်နေ ကြတာ.. နိုင်ငံခြားသား ဆိုတာ နဲ့.. အပြစ်ရှာ ရန်ညိုးသို တဲ့.. စိတ်ဓါတ် က.. မှန်ကန် တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် မှ မဟုတ်တာ။ နှစ်ပေါင်း လေးဆယ် လောက် ရှမ်းပြည်နယ် ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဖြည့်စွမ်း ပေး ခဲ့ ပြီး.. သူ့ ဆေးရုံ နဲ့ သင်တန်းကျောင်း ကြီး ပြည်သူပိုင် သိမ်းခံ လိုက် ရ ပြီး.. သိပ်မကြာခင် နမ့်ခမ်း မှာပဲ သေဆုံး သွားတယ် ဆိုတဲ့ .. အသက် ၈၀ ကျော် အမေရိကန် ဆရာဝန် ကြီး အကြောင်း...သမီး တို့.. ဘယ်သမိုင်း စာအုပ် မှာများ သိခဲ့..ဖတ်ခဲ့ ရ လို့ လည်း။ သမီး တော့.. အဲဒီ ဆရာဝန် ကြီး ကိုယ်တိုင် ရေး ခဲ့ တယ် ဆိုတဲ့.. The Life ofaBurma Surgeon ဆိုတဲ့ စာအုပ် ကို လည်း တနေ့ တော့.. ရှာဖတ် အုံးမယ် လို့.. တေး နေ မိတယ်။
အခု ဖတ်ခဲ့ ရ တဲ့ စာအုပ် ၂ အုပ် ကို ..သတ္တုချ ကြည့်မိ လိုက် တာ တော့ ..စော်ဘွားကြီး စ၀်ရွှေသိုက် ရော..စော်ဘွား တွေကို မထောက်ခံ ခဲ့တဲ့.. ဦးထွန်းအေး ရော.. နှစ်ယောက် စလုံး ဟာ... ဗမာ ပြည်မ အစိုးရ ရဲ့ .. လုပ်နည်း လုပ်ဟန် တခု ဖြစ်တဲ့.. ခွဲထုတ် တဲ့ နည်း နဲ့... နိုင်ငံရေး သင်းကွပ် ခံ လိုက် ရ တာ ပါ လား… ဆို တာ ပဲ.. ဖေဖေ။
အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ တွေ က.. မြန်မာပြည်ကို Divide and Rule နဲ့ အုပ်ချုပ် ခဲ့ တယ် ဆိုတာ.. ဘာဟုတ် မလဲ နော်..။ မတူ တဲ့ လူမျိုးစု တွေ ကြားထဲ မို့..ထားတော့။ တကယ်ဆို..ပြည်ထောင်စု စနစ် အတွက်..အုတ်မြစ် လို့ တောင် ပြောလို့ ရ နိုင် မလားပဲ။ မြန်မာပြည်သား ချင်း လုပ်တဲ့ Divide and Rule က မှ.. ဗမာ ..ဗမာ ချင်း ကြားထဲ.. ရှမ်း- ရှမ်းချင်း ကြားထဲ.. ကရင်- ကရင် ချင်း ကြားထဲ… စစ်တပ်ထဲ.. ပါတီ ထဲ.. အဖွဲ့တွေ ထဲ.. သွေးခွဲ..သပ်သျှို ..လူမွေး ..ခွဲထုတ် နဲ့.. နည်း မျိုးကို စုံနေ တော့ တာပဲ..။ အိမ်ကြက်ချင်း မမှတ်မိ တော့ ယုံ မက .. ကိုယ့် အမြီး တောင် ကိုယ် ပြန်နင်း မိ ကြ တော့ မလား ပဲ။
အခု ဖေဖေ့ ဆီ ဒီစာ ရေး နေ တုန်းပဲ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည့် ရဲ့.. ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် တဲ့ အိတ်ဖွင့် ပေး စာ ကို တန်ပြန် တဲ့.. အနေနဲ့.. အချိန်မီ အိတ်ဖွင့် ပေးစာ တစောင် ထွက်လာတာပဲ ကြည့် တော့..။ လက်သပ် တောင် မွေးစရာ မလို.. ပေါပေါ သောသော ကို အသုံးချ လို့ ရ နေတဲ့.. တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတဲ့.. လူ တချို့ ကို လက်မှတ် ထိုးခိုင်း ပြီး.. စာ ထုတ် လိုက် ပြန်ပြီ..။ လူထု က လေးစား တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တချို့ကို လည်း.. နိုင်ငံရေး သင်းကွပ် ဖို့ ကြိုးစား နေ ကြ ပြန်ပြီ။
ဘာဖြစ် လို့ များ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ စကားက.. ဗမာ ပြည်မ အုပ်ချုပ်သူ အစဉ် အဆက် အတွက်.. နားခါး စရာ ကောင်း နေ ခဲ့ တာလည်း။ နွံထဲ မှာ ကျွံ နေတဲ့..သမိုင်း လှည်းဘီး ကြီးကို.. ဘာလို့ များ ဆွဲ မထုတ် ကြ ပဲ.. နောက်တပတ် ပြန်လည် ခိုင်း နေ ရ တာလည်း။
ဘာမန်နိုက်ဇေးရှင်း ကြီး ပိုကြီးထွား လာတော့ကော သမီး တို့ လို သာမာန် ဗမာ ပြည်သူ လူထု တွေ အတွက် ဘာအကျိုးထူး မှာ မို့ လည်း.. ။ တကယ်တော့ လည်း သမီး တို့ ကြီးပြင်း နားလည် ခဲ့ သလောက် သာမန် ပြည်သူ ပြည်သား တွေ ရဲ့ နေ့စဉ် ဘ၀ နေထိုင်မူ တွေ ထဲမှာ..ဘာမန်နိုက်ဇေးရှင်း ကြီး ရှိ မ နေ ခဲ့ ပါ ဘူး။ ဖေဖေ ပြောသလိုပဲ..လူမျိုးစု တွေ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက် ကတည်းက..စစ်ကျွန်ပြု မူ ကို ခံ နေ ခဲ့ ကြတာ.. သမီးတို့လို ပြည်မ က..ပြည်သူ တွေ က..အခု ..ကိုယ်တိုင် စစ်ကျွန်ပြုမူ ခံ ရ တော့ မှ.. ကိုယ်ချင်း စာ တတ် လာတာ ဆိုတာ..။ တကယ် ဆို..အဓိက ပြသာနာ က.. စစ်ကျွန်ပြု မူ ပဲ..။ အဲဒီ စစ်ကျွန်ပြု ခံ ရ တဲ့ ဒုက္ခ တွေ ကို ကရင် တွေ ချည်း ခံစား နေရ တာ မဟုတ်ဘူး ..မွန် တွေ ရှမ်း တွေ ချည်း ခံစား နေရ တာ လည်း မဟုတ် ဘူး …မြန်မာ တပြည် လုံးက..သာမန် ပြည်သူ တွေ အားလုံး ခံစားနေရ တာ လေ...။
အခြင်းခြင်း ရဲ့ ကြားမှာ ရှိ နေတဲ့သမိုင်း ဆူး တွေ ကို .. တယောက် တလှည့် မနှုတ်ပေး နိုင် သ၍.. အကျေအလည် မဆွေးနွေး..မဖော်ပြ..မဖွင့်ချ နိုင် သ ၍ တော့…သမိုင်း ဆူးပင်း တွေ ထက် နေ ဦးမှာ ပါ ပဲ..။ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ကလည်း ဝေး နေ ဦး မှာ ပါပဲ လေ…။
အေးလေ.. ဘာတွေ ဘယ်လို ပဲ ပြောပြော.. သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက် ဘယ်လိုပဲ ငြင်းကျ အပြစ်တင်ကျ.... The Moon Princes စာအုပ် ထဲ မှာ … ကိုးကား ထားတဲ့.. မြန်မာ့ အရေး လေ့လာသူ မာတင်စမစ် ရဲ့ မှတ်ချက် ကလေး က ..လက်တွေ့ အကျ ဆုံး ပဲ.. ဖေဖေ..။
One day the idealism and rhetoric on all sides must marry with the harsh social realities, and then it will be recognized that no side hasamonopoly on righteousness or political values.
တနေ့မှာ တော့..ဘက် အသီးသီး ရဲ့ အယူဝါဒ ရေးရာ တွေ.. လေလုံးထွားမူ တွေ ဟာ.. လက်တွေ့ဘ၀ လူမူ ဒုက္ခ တွေ နဲ့.. ရင်ဆိုင် နှစ်ပါးသွား ရ မှာ မလွဲ ပါဘူး။ အဲဒီ တော့ မှ.. အမှန်တရား ဒါမှ မဟုတ် နိုင်ငံရေး စံနှုန်း တန်ဖိုး ဆိုတာတွေ အပေါ် မှာ.. ဘယ်သူ တဦး တဖွဲ့ မှ.. မူပိုင် ပြု လို့ မရ ဘူး ဆိုတာ.. သဘော ပေါက် လာ ကြ ပါ လိမ့်မယ်.. တဲ့..။
အဲဒီ တနေ့ ကို.. ရောက်များ နေပြီ လား ..ဖေဖေ..
အဲဒီလို ဆိုရင် လည်း..သမီး တို့ ငယ်ငယ် က.. မြန်မာ့အသံ က ..အမြဲ လွှင့်လေ့ ရှိ တဲ့..သန်းသန်းဆင့် ရဲ့..တုံ့လှည့် မေတ္တာ သီချင်း လေး ကိုပဲ.. ပြန်ကျော့ ဆို ကြ ရ တာ ပေါ့.. ဖေဖေ ရယ်…။
++ တို့ပြည်ထောင်စု..( လူထုရေ... ) ++
သီချင်း များ စုစည်း ပေးထားသော source အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်မိပါသည်။
Labels: Books , Burma History , Family , musics
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ ...။ သည်စာကိုဖတ်နေတုန်း ယူကျုကနေ သန်းသန်းဆင့်သီချင်းကို ဖွင့်ထားမိတာ...။ စာလည်း ဆုံးရော ..ဟော တွေ့ပြန်ပြီ တခါ..သည်သီချင်းလေးပဲ.....။ ဘယ်နှစ်ကျော့မှန်းမသိပဲ ထပ်နားထောင်လိုက်ပါတယ်။
အို ပြည်ကြီးရှင်တွေ၊ ပြည်ကြီးရှင်တွေ
ပြည် ကြီး ရှင် တွေ....
ခုမှ သန်းသန်းဆင့်သီချင်းလဲ နားထောင်မိတယ်။
ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ရင်ဘတ်ထဲ ထိ တိုက်ရိုက်
ဘလော့မလည်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။ ကေ့ဘလော့ ၀င်ပြီး ဒီပို့စ်ကို အစအဆုံး ၂ ခေါက်ပြန်ဖတ်မိတယ်။ တကယ်က အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေ ပဲ ကေ။ ဗမာလဲ အဖိနှိပ်ခံနေရတာပဲ။ စစ်အုပ်စုထဲမလဲ တိုင်းရင်းသားတွေ အများကြီး ပါတယ်လေ။
ဒို့ပြည်ထောင်စု အလံတော်သည် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှ ၀ယ်လာသည်၊ တထွန်သားနဲ့ ချုပ်ထားသည် အားလုံး ဆေးဆိုးကြပါသည် ...:P
ဘလော့ဒေးအမှတ်တရလေး တက်ဂ် tag ထားပါသည် ... :P
ဒီစာ ဖတ်လိုက် ရတာ .. ကြည်လည်း ကြည်နှူး မိပါတယ် ...
အများစု က အနည်းစု ကို လွှမ်းမိုး ချင် တာ ကတော့ နေရာ တိုင်းမှာ ရှိ မြဲ ရှိ နေဆဲ ထင်ပါတယ်.
ကျေးဇူးပါ မကေ .. ..
စာလေးဖတ်သွားတယ် အဟဲ ပြောချင်တော့ပါဘူး
အထက်တန်း ကျောင်းသားဘ၀ကတော့ ပြည်ထောင်စု, ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကို (ဖတ်စာအုပ်ထဲက အတိုင်း) နားလည်တယ်၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ဆိုသူတွေဟာ အစွန်းရောက် ခွဲထွက်ရေး ၀ါဒီတွေပဲလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ နောင် တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီး တိုင်းရင်းသား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရစကားပြောရတဲ့အခါမှ “သူတို့ ရင်ထဲမှာ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ဒုက္ခသုက္ခတွေ, ပြဿနာတွေကို နားမလည်ခဲ့ပါလား...” လို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကေရေးခဲ့သလိုပဲ သမိုင်း ဆူးတွေကို … တယောက် တလှည့် နှုတ် မပေးနိုင်သေးသ၍… အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးက ဝေး နေဦးမှာပါ။
BURMA so called Myanmar nowadays isaland with no single aborigine like Australia.Before the occupation of PYU,KAN YAN & THET its natives were believed to be" NEGRITOS" by most historians. BURMA isacountry of diverse people with Multiethnicity.Militarization upon Burmanization concepts & ideology will never lead to "Peaceful Burma". I do agree with you,KAY.Military tyrants are now using"Divide & Rule" strategies for opponents.But most Buddhists believe laws of Kamma.One day will be for them to have same reactions & fate. Thiha Thu(KAMBAWZA)